Baaq Ka Soo baxay Jaaliyaadda SSC ee Denmark
ANAGOO AH JAALIYADA SSC EE KU NOOL WADANKA DENMARK GUUD AHAAN GAAR AHAAN MAGAALADA AARHUS iyo Fredericia WAXAANU KA xunahey kana tiiraanyeysanahey dhibaatada halkaas ka dhacday waxaanu tacsi u diraynaa dhammaan qoysaskii, eheladii, iyo qaraabadii ay ka geeriyoodeen dadkii ku nafwaayey mashaqadii Buuhoodle ka dhacday.
Waxaan u aragnaa in ay tahay arrin laga naxo oo laga murugoodo in dad walaalo ahi fidnida intaa le'egi dhex marto. Waxaan wada ogsoon nahay in dagaal beeleed aan cidina khasaare mooyee guul ka gaadhi Karin,
- Waxaana soo jeedineynaa dhamaan Isimada , aqoonyahanada, cuqaasha, ururada haweenka iyo kan dhalinyaradaba iney wax ka qabtaan una howl galaan sidii xaaladan murugada leh loo qaboojin lahaa.
- in gudi issimo , aqoonyahano loo magacaabo bulshada rayidkana ay ka qeyb qaataan.
-waxaan kaloo soo jeedineynaa in jaaliyadaha dibada dhamaan ey ka caawiyaan waxii dhaqaale ah oo mashaqadaan lagu dhameen karo. Magacyada baaqa soo qaray:-
1:-Faarah M nuur( sooma jeeste)
2:-Abdul mahamed kubey
3:-C/qani ahmed mahmed (gureey)
4:-Gacan abdi macaane
5:-C/rashiid maxamud cawed (caga weyne)
6:-Ahmed mahamud (fayax)
7:-C/salaan mahamed cade
8:-Baashi mohamed osman ( afgeele)
10:-Ciise hassan ran
11:-C/lahi jama diiriye (indhacase)
12:-Cabdi ciise oog
14:-Abdi ilmi iid
15:- iise abdi ilmi
16:-Ibrahim abdi qayaad
17:-isma,iil awil waraabe
18:-C/qadir baruud mahamed
19:-C/naasir Faarah mahamed
20:-ahmed mahmud geele
21:-Mire ali mire
22:- liibaan godane
23:-sharmarke faarah mahamed
24:-Mahamed yousuf abuuker
25:- c/rashiid ahmed sahal
26:-Awil ahmed ladene
28;-Maxamed muse (Qowdhan)
30:-Jamac Farax Cabdi
Hassan Jama hassanjama@hotmail.com